Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- स्वास्थ्य शैली
काठमाडौं, १३ फागुन । अर्थोपेडिक अस्पताल शाल्बीले नेपालमा पनि आफ्नो सेवा सुरू गर्ने भएको छ । भारतको अहमदाबादमा रहेको उक्त अस्पतालले यहाँका विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गरेर सेवा सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
जनकपुरधाम, २९ माघ । प्रदेशको स्वास्थ्य नीति बनाउन सरकारले गठन गरेको कार्यदलले आफनो मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
वीरगंज, ६ माघ । एल.एस.न्यूरो एण्ड जेनरल हस्पिटल प्रा.लि. वीरगंजद्वारा एक महिनाभित्र ब्रेन टीयूमर, ब्रेन हेमरेज, डीपरेस फैक्चर, क्रोनिक सबडीयूरल हेमाटोमा, टाउकोमा पानी जमेको १२ वटा बिरामीको सफल उपचार गरेको छ ।
पर्सा, १६ मंसिर । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको परिसरभित्र प्रभु हस्पिटल र माट्रिका आई फाउण्डेशनको सहयोगमा संचालित प्राथमिक उपचार कक्षको सोमबार बिहान उद्घाटन भएको छ ।
रौतहट, १७ साउन । महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल बसुन्धरा काठमाडौंको आयोजनामा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ५ हजमिनियाँ पताहीस्थित आधारभूत विद्यालयमा बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
इटहरी, १५ साउन । इटहरी अस्पतालमा २४ घण्टे आकस्मिक (इमरजेन्सी) सेवा सुरु भएको छ ।
काठमाडौं, ११ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीको आकस्मिक तथा बहिरंग सेवा भवनको उद्घाटन गरेका छन् ।
मानव संसाधन प्रक्षेपण कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानव संसाधन प्रक्षेपण कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर
कपिलवस्तु, २७ जेठ । मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. १ पकडीमा निशुल्क आयुर्वेद सेवा कार्यक्रममा ४ सय ५ जनाले सेवा लिएका छन् ।
उपेन्द्र यादवले गरे अंगदान गर्ने घोषणा
भक्तपुर, ३० फागुन । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मरणोपरान्त अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक अभियान चलाउने उद्देश्यसहित मेडिकल सोसाईटी
काठमाडौं, २३ मंसिर । चिकित्सकहरुको साझा संस्थाको रुपमा २०७४ सालमा स्थापना गरिएको युनाईटेड नेशनल मेडिकल सोसाईटी अफ नेपालको बिधिवत रुपमा उद्घाटन गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज, १९ मंसिर । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घअन्तर्गत यहाँ सञ्चालित फत्तेबाल आँखा अस्पतालले ३२ वर्षको अवधिमा दुई लाख २८ हजारभन्दा बढीको आँखाको शल्यक्रिया गरेको छ ।
सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं, १२ मंसिर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
नवजात शिशुलाई एसओएस बालग्रामको संरक्षणमा
बनियानी, २१ कार्तिक । जिल्ला बालकल्याण समिति झापाले एकमहीने शिशु खुशी कार्कीलाई एसओएस बालग्राम इटहरी सुनसरीको जिम्मा लगाइएको छ ।
सडकपेटीमा लाइसेन्स नभएका झोलेपोकेले आयुर्वेदलाई बदनाम गराए : मन्त्री बराल
चन्द्रकात खनाल, रुपन्देही, १९ कार्तिक । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले आयुर्वेदलाई अनुसन्धान र वैज्ञानिकताको प्रमाणिकरण गर्दै अघि लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
प्रसूति गृह भवन शिलान्यास
राकेश यादव, रौतहट, १७ कार्तिक । रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर २ औरैयामा १८ लाखको लगतमा निर्माण हुने प्रसूति गृहको एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने महिलाको संख्यामा वृद्धि
बाँके, १७ कार्तिक । बाँकेको डुडुवागाँउपालिकामा पछिल्लो एक वर्षमा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, १२ कार्तिक । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले गरिबीको रेखामुनी रहेको यस प्रदेशका जनताहरुको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव
महोत्तरी, ११ कार्तिक । गौशाला नगरपालिकास्थित सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव भएपछि सेवाग्राही रित्तै हात फर्किनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।